MPEG Joiner: Sida loo soo biir MPEG Files
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo biir MPEG Files
Sida loo soo biir MPEG Files
Haddii aad ka fikirayso ku saabsan sida loo wada biiro files MPEG filim dhamaystiran ama video oo aan wax dib-u-Deji, tixgelin u sameeyeen. In this article, waxaan ka hadli doonaa mawduuc ku biiro files MPEG wada si fudud. Waxa ay noqon doontaa xaqiiqdii fudud inta aad leedahay joiner MPEG u fiican. Waxaan u isticmaali Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Waa MPEG video ah joiner ugu fiicnaa ee aan soo gaarto, si ay ugu biiraan badan clips MPEG wada muuqan oo markaas si toos ah la wadaagto abuurka video on YouTube, Facebook, Twitter, qalabka sida iPhone, iPad, PSP iwm ah, xitaa gubi in DVD.
Ma danaynaysaa, ma tahay? Ok, aynu soo bixi oo hore loo soo dajiyo this joiner file MPEG weyn. Markaas raac tilmaan-hoose si ay ugu biiraan MPEG videos galay mid ka mid talaabo talaabo ah.
Talaabada 1: files Import MPEG in this MPEG Joiner
In tallaabadaas, dajiyaan oo dhan MPEG faylasha aad rabto in aad wada biiro. Si tan loo sameeyo, waxaad riixi kartaa "Import" doorasho si dajiyaan files MPEG ka disk adag tahay in album this app ee, ama si toos ah jiidi kuwaas files diirada MPEG kombiyuutar si ay album User ee.
Tallaabo 2: Ku biir files MPEG
Next, waxaan ku khasbannahay in jiidayo, kuwaas oo intaa ku daray files MPEG ka album in Timeline ee this video MPEG joiner. Laakiin waxaa jira laba arrimood oo muhiim ah waa in aad raacdo:
1. Jiid MPEG gudbiyo mid mid si files MPEG, kuwaas oo loo qoondeeyey waxa sida ay si play ah.
2. Ha jiidi mid file in file kale haddii aad rabto in aan kala tagno video jira. Haddii loo baahdo, waxaad dhaqaajin karin bar slider ay ku darto files MPEG in Timeline ka fiican.
Fiiro gaar ah: Ka sokow ku biiro files MPEG, taas smart MPEG joiner kuu oggolaanayaa in aad samayn shaqooyin tafatir dheeraad ah, sida beddesha, dalagga, kala video files, ku dar horyaalka, video saamayn iyo watermark iwm Hel dheeraad ah ka: files Edit MPEG >>
Sida loo kala tagney / goo / Goo VOB Files
Sida loo soo dejinta Videos in Lugood Library Your
Sida loo ciyaaro m2ts la xbmc
Sida loo badalo mts / m2ts in regelingen daaqadaha
Sida loo Beddelaan MP4 in MPEG-2
KeepVid aan shaqaynayn? Xaliyay
Sida loo rogo ama MTS in AVI